अशोक दर्जी एकाएक यस्तो अवस्थामा भेटिए ! गर्लफ्रेण्ड बोकेर बाईकमा सरर ! (भिडियो हेर्नुहोस)
नेपाली संगीत क्षेत्रमा चर्चित बाल गायक अशोक दर्जीले राम्रो छाप छाड्न सफल भएका छन । अहिले अशोक दर्जी र एआर बुढाथोकीलाई एक म्युजिक भिडियोको छायांकनको क्रममा भेटिएका छन । अशोक दर्जीको पहिलो गित मन बिनाको धन ठुलोकी धन बिनाको मन निक्कै लोकप्रिय बनेको थियो । त्यसपछिको चौरीको चाम्रो छुर्पी पनि त्यत्तिकै हिट भएको थियो । हिजो आज म्युजिक भन्दा पनि अशोक आफ्नो पढाईलाई प्राथमिकता दिदै आएका छन ।
चर्चित बालगायक अशोक दर्जीलाई पहिलोपटक दर्शकले म्युजिक भिडियोमा पनि देख्न पाउने भएको हो ।बाल गाएक अशोक दर्जिलाई संरक्षण गर्दै आएका बरिस्ठ गायक तथा संगीतकार टंक बुढाथोकीको स्वर रहेको सिम्पल डिम्पल बोलको गीतको म्युजिक भिडियो भर्खरै मात्र छायांकन सकिएको छ । यसै गितको भिडियोमा बाल गाएक अशोक दर्जी र ए आर लाई देख्न सकिन्छ।
त्यस्तै भिडियोमा अन्य कलाकार अशोक दर्जी र ए आर बुढाथोकी, एल्भिना ,दीक्षा लगायत अन्य कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ । सुटिङ स्थलमा अभिनेता बिराज भट्ट पनि पुगेर अशोक दर्जीलाई बधाई समेत दिए । नेपाली साङ्केतिक दुनियामा चर्चित बनेको गित मन बिनाको धन र चौरिको चाम्रो छुर्पी बोलको गितले देश तथा बिदेशमा तहल्का मच्चाए पछि बाल गाएक अशोक दर्जी र टन्क बुढाथोकी लगायत ए आर बुढाथोकीको चर्चा चुलिएर गएको थियो।
नेपाल तथा बिदेशमा हुने मेला महोत्सवमा उनिहरुकै नामले हजारौं दर्शक कार्यक्रममा आउने गर्छन । पछिल्लो बर्श नेपालको पुर्ब देखि पश्चिममा अशोक दर्जी , टन्क बुढाथोकी र एआर बुढाथोकीको दमदार प्रश्तुती रहेको थियो।
आज अशोक र साथी एआर एक म्युजिक भिडियोको छायांकनको क्रममा बाइकमा गर्लफ्रेन्डलाई चढाएर हिडेको अवस्थामा भेटिएको छ । बाकी भिडियोमा हेर्नुहोस :